လူငယ်တွေအတွက် အရမ်းကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…. – The Word
မိဘဆိုတာ သားသမီးတွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ မိဘဆိုတာ ဘုရားနဲ့ တဂိုဏ်းတည်းထားရမယ့် ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။မိဘကို စော်ကားတဲ့လူဟာ ဘယ်တော့မှ ကြီးပွားချမ်းသာမှု မရရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ အားလုံးဘဲ သိရှိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရှိတုန်းပေး…ရှိတုန်းကျွေး ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း မသေခင် မိမိရဲ့ မိဘဆွေမျိုးများကို အစအစအရာရာ ဂရုစိုက်ပြီး လိုလေသေးမရှိအောင် ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။ဒီvideoလေးဟာ ပညာပေးသက်သက် ဖြစ်စေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့ ညီငယ်၊ ညီမငယ်များအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ရှိပါတယ်။ ဝါရင့်အနုပညာရှင်ကြီးတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် အားနည်းချက်တွေ၊ အမှားတွေပါရင်လည်း နားလည်ပေးကြပါလ်ို့ လူငယ်တွေကိုစား ပြောကြားလိုပါတယ်။
အားလုံးဘဲ မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်နိုင်သော သားကောင်းသမီးကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေ…
လူငယျတှအေတှကျ အရမျးကောငျးလို့ တငျပေးလိုကျပါတယျဗြာ….
မိဘဆိုတာ သားသမီးတှရေဲ့ ကြေးဇူးရှငျတှပေါ။ မိဘဆိုတာ ဘုရားနဲ့ တဂိုဏျးတညျးထားရမယျ့ ကြေးဇူးရှငျတှပေါ။မိဘကို စျောကားတဲ့လူဟာ ဘယျတော့မှ ကွီးပှားခမျြးသာမှု မရရှိနိုငျဘူးဆိုတာ အားလုံးဘဲ သိရှိကွမယျလို့ ထငျပါတယျ။
ရှိတုနျးပေး…ရှိတုနျးကြှေး ဆိုတဲ့စကားအတိုငျး မသခေငျ မိမိရဲ့ မိဘဆှမြေိုးမြားကို အစအစအရာရာ ဂရုစိုကျပွီး လိုလသေေးမရှိအောငျ ကြှေးမှေးပွုစုစောငျ့ရှောကျနိုငျကွပါစေ။ဒီvideoလေးဟာ ပညာပေးသကျသကျ ဖွဈစရေနျအတှကျရညျရှယျပွီး တငျပေးလိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ။
ပါဝငျသရုပျဆောငျပေးထားတဲ့ ညီငယျ၊ ညီမငယျမြားအားလုံးကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးပငျ တငျရှိပါတယျ။ ဝါရငျ့အနုပညာရှငျကွီးတှေ မဟုတျတဲ့အတှကျ အားနညျးခကျြတှေ၊ အမှားတှပေါရငျလညျး နားလညျပေးကွပါလို့ လူငယျတှကေိုစား ပွောကွားလိုပါတယျ။
အားလုံးဘဲ မိဘကြေးဇူးကို ဆပျနိုငျသော သားကောငျးသမီးကောငျးမြား ဖွဈကွပါစေ…
မိဘမတ်ေတာ ပညာပေး ဇာတျလမျးတိုjum comedian group ကိုအားပေးကွအုံးနျောဆုလဲတောငျးပေးကွပါပရိတျသတျကွီး
Posted by JUM JUM JUM JUM on Thursday, July 23, 2020
သောက်ရေအခက်ခဲဖြစ်ပြီး ရေနောက်နေတဲ့ ဒေသတွေအတွက် ရေကိုသန့်စစ်နည်း
မိမိကိုယျကို ကံတှညေံ့လာပွီထငျရငျ ဒါတှလေုပျဖို့မမပေ့ါနဲ့
မဖြစ်မနေ မှတ်သားထိုက်သော အိမ်သုံး လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းလေးတွေ